Virus! - MYSTERY ZILLION
December 2008 edited December 2008 in Help Desk
When I start the window, my document explore will appear every time. Is it virus? I have AVG software. But can't remove vrey well. So what should i do and will I choose another software. Pls .
I suggest that you should change any anti-virus software.It is just suggestion.I like Kaspersky software.
အစ်ကိုရေ ဗိုင်းရပ်စ်လိို့တော့မထင်ဘူးနော်။ (အထင်ကိုပြောတာပါ) ဒါပေမဲ့ အန်တီ ဗိုင်းရပ်စ်ကို အမြဲ အပ်ဒိတ် လုပ်ထားဖို့တော့ လိုတယ်
ကျွန်တော်သုံးတာက Aviral နဲ့ PC tools Internet Secuity ပါ။
Run Box ကနေ regedit နဲ.registry ထဲ၀င်လိုက်
HKEY_ LOCAL_ MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_Winlogon ကိုတစ်ဆင့်ချင်းသွားလိုက်နော်
အဲ့မှာ Userinit ရဲ. value ကို C:\_WINDOWS\_system32\_userinit.exe
ကျွန်တော်ကတော့ virus လို့ထင်တာပဲ။ Kaspersky 7.0 ကိုinstall လုပ်ပြီး scan ကြည့်ပါလား။ မရှိရင် ကျွန်တော့်ဆီမေးလ်လှမ်းပို့လိုက်လေ။ အင်စတော်လာရော ကီးဂျန်ပါပေးမယ်။
အားလုံးလဲ kaspersky 7.0 product installer နဲ့ keygen လိုချင်ရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။2ရက်အတွင်း ရစေရပါမယ်။:))
window စတတ်ချင်း my document ပေါ်လာတာက virus ရှိလို့ (သို့) virus သေလို့ setting ကျန်ခဲ့တာပါ။
AVG ဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုရင် Your Uninstaller 2008! ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးကိုသုံးကြည့်ပါ။
AVG ဖြုတ်လို့ရပြီဆို Kaspersky ကိုတင်ကြည့်ပါ။ Kaspersky တင်လို့ရရင် Update လုပ်ပြီး Full Scan လုပ်ပါ။ Kaspersky တင်လို့မရသေးရင် Virus ကိုအရင်သတ်ပါ။ Virus သတ်လို့မရဘူးဆိုရင် ဖြင့် ဘာ Virus လဲဆိုတာတော့ ပြောပြပါ။ ဖိုရမ်ထဲက ပညာရှင်များ ဝိုင်းဝန်ဖြေပေးပါလိမ့်မယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိဘယ်လိုစစ်လို့ရလို့ရလဲဆိုရင် အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အနီပြထားတဲ့နေရာလေးတွေကို ကျွန်တော်လုပ်ထားသလိုလုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Window+E နှိပ်ပြီး ဘယ်ဘက်ဘေးကနေ ထည်ကိုဝင်ကြည့်ပါ။ autorun.inf ဖိုင်ရှိလားဆိုတာကြည့်ပါ။ ရှိရင် အဲဒီဖိုင်ထဲကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ ဘာကို run ခိုင်းထားလဲပေါ့။
နောက်တဆင့်က C:\_Windows\_ အောက်မှာ autorun.inf ရှိလားကြည့်ပါ ရှိရင်ဖျက်လိုက်ပါ။
ဒါလေးကတော့ ဗိုင်းရပ်စ် ရှိမရှိအရင်စစ်ကြည့်တာပါ။ အသေးစိတ်တော့ဟုတ်သေးဘူးဗျ။ အရင်စမ်းကြည့်ပါဦး။
ကျွန်တော်ရဲ့ email က [email protected] ပါ။ အကိုရဲ့ email ကိုမသိလို့ ဒီမှာပဲပြန်တင်လိုက်တယ်။
zayarhtet wrote: »
ကို zayarhtet ရေ Winlogon ထိဝင်ပြီး userinit ကို မတွေ့လို့ ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူး
အခုလိုကူညီတဲ့ ညီအကိုများကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
ကို ညမီးအိမ် ရေ
autorun.inf file ကို ရှာတာ မတွေ့ဘူး။ msconfig ကနေ startup မှာ disable all လုပ်တာလဲ ပေါ်တာပဲ။ စက်က တစ်ချက်တစ်ချက် ဟမ်း သွားတယ်။ တခါတခါ စက်စဖွင့်ရင် window logo မှာတင် ရပ်ပြီး ပြန်ဝင်ရတယ်။
run box ထဲ၀င်ပြီး msconfig ရိုက်။ ပြီးရင် startup ထဲမှာ တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်ပါလား။ မလိုအပ်တာတွေ uncheck လုပ်လိုက်ပေါ့။
ကျွန်တော်ဆီက virus ကျတော့ screen saver ဖြစ်ရင် အမြဲတမ်းတက်တက်လာတယ်
SENS.DLL တဲ့အမြဲတမ်းပေါ်နေတယ်ဗျာ။ အခုကွန်ပျူတာမှာ တင်ထားတဲ့ software ကတော့ McAfee 8.0.5 ပါ mcafee ကတော့သတ်တော့သတ်ပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့ screen saver ဖြစ်တိုင်း ပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ဗျ နေ့တိုင်းနီးပါး update လုပ်ပေးပါတယ်။ Scan လဲလုပ်ပါတယ်
အဲဒါဘယ်လိုမျိုး မှ အမြစ်ပျက်ချေမှုန်းနိုင်မလဲဆိုတာ ကူညီကြပါအုံးနော်
တပွဲတိုးနည်းနဲ့virus တွေကိုကင်ချင်ရင်တော့ ဒီ bat file လေးနဲ ့တွယ်လိုက်ဗျာ... ဘယ်ဖိုရမ်ကနေ ရလာတာလဲတော့သိတော့ဘူး။ အစွမ်းတော့ထက်တယ်။ ရေးတဲ့သူနာမည်က ကိုKaiZer လိုတော့ထင်တာပဲ။ အမှားလုပ်မိရင်ခွင့်လွတ်ပါ။:77::77::77: